UPDATE: Khadka Internet-ka Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya oo dib u soo laabtay | HalQaran.com
Home Warar Cusub UPDATE: Khadka Internet-ka Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya oo dib u soo laabtay
Muqdisho (Halqaran.com) – Warar goor-dhow soo gaaray warbaahinta Halqaran.com, ayaa sheegaya, in saacado ka hor uu dib u soo laabtay Internet-kii Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, kaddib markii in ka badan 24 saacadood uu go’aan.
Mar qura ayaa si weyn looga dareemay guud ahaa magaalada Muqdisho iyo Koonfurta Soomaaliya.
Ilaa iyo hadda lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysay in uu go’o xariga Internet-ka, balse waxaa jira warar sheegaya in markab ganacsi uu jaray.
Waxaa jirtay hadal heyn ku saabsaneyd in arrimo siyaasadeed ay dowladda Soomaaliya u joojisay, balse Wasiirka Boostada iyo Isgaarsiinta ee DFS uu warkaasi beeniyay.
Shacabka ku nool caasimadda Muqdisho oo qaarkood la mid ah warbaahinta gudaha ayaa sheegay, in Internetka uu muhiim ugu yahay waxyaabo badan oo ay ugu horeeyaan, Waxbarashada iyo Shaqooyinka gaarka ah iyo arrimo kale oo badan.
Wasiirka Boostadda iyo Isgaarsiinta Soomaaliya, Cabdi Canshuur Xasan ayaa ku tilmaamay dhacdadan Musiibo wayn oo Soomaaliya ka soo gaartay illaa iyo hadda khasaaro dhan in ka badan 130 milyan oo doolar”.
Ugu dambeyn, wasiirka ayaa sheegay, in xargaha iyo fiilooyinka Internetka la hagaajiyay, wixii hadda ka dambeeyana ay howlihii iyo adeegyadii ay caadi ku soo noqon doonaan.
Khadka internetka oo dib u soo laabtay Soomaaliya